Al-shabab oo Mar Kale Weerartay Mpeketoni
Mintidiin looga shakisanyahay inay ka tirsanyihiin ururka Al-shabab ayaa weerarkii labaad ku qaaay magaalada Mpeketoni ee ku taala gobolka xeebta ee dalka Kenya, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof.
Ciidamada Booliska ee deegaankaas ayaa sheegay Talaadadii shalay in laba ka mid ah saraakiisha booliska ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarka.
Goobjoogayaasha ayaa ku soo waramaya in ragii weerarka geystay ay sidoo kale dab qabadsiiyeen dhowr guri.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Kenya Joseph Ole Lenku ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay ay bur buriyeen qalab isgaarsiinta magaalada isla markii ay weerarka bilaabeen.
Kooxda al-Shabab ee lala xiriiriyo ururka al-Qacida ayaa sheegatay masuuliyadda weerarka, iyagoo sheegtay in 20 qof ay ku dileen.
Al-Shabab ayaa sidoo kale sheegatay masuuliyadda weerarkii isla Mpeketoni ka dhacay Axadii ee ay ku dhinteen qiyaastii 52 qof.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay in ilaa iyo 30 rag ah oo hubeysan oo saaran gawaari ay galeen magaalada iyagoo weerarar Hoteello, saldhig boolis, guryo, iyo xafiisyo dadweyne oo kale, qaar ka mid ah dadka weerarkaas ku dhintay ayaa isugu soo ururay si ey u daawadaan cayaaraha Koobka Kubadda Cagta ee Aduunka.
Waxaa kaloo goobjoogayaashu ay sheegeen in ragga weerarka geystay ay kala soo cayeen muslimiinta iyo dadka aan mulimka aheyn.
War ay soo saartey kooxda Al Shabab ayay ku sheegtay in weerarkan uu yahay mid loogu aargudanayo dilka wadaaddada Muslimiinta ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya, halkaas oo dhowr ka mid ah hoggaamiyeyaasha diinta lagu diley labadii sanno ee la soo dhaafey.
Al Shabab ayaa sidoo kale ku dhawaaqdey in Kenya ay tahay “goob dagaal”, iyagoo uga digey dalxiiseyaasha iyo shisheeyaha inaysan tegin Kenya.